Kutheni Uloliwe yenye eyenzwe Modes yokuhamba | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > Kutheni Uloliwe yenye eyenzwe Modes yokuhamba
Kutheni Uloliwe yenye eyenzwe Modes yokuhamba
Business ahambe ngetreyini, Uhambo loLoliwe, Travel Europe
Ixesha lokuFunda: 6 imizuzu(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 11/12/2020)
Le polemic on ukuqeqesha xa kuthelekiswa ibhasi eYurophu ke isihloko uphelayo, wonke Imelwe izimvo zabo. kodwa, Ingaba nokuba sithetha ngokhuseleko, kwaye ukuba ngaba - ngaba kwanele? Ukhuseleko zokuhamba yethu abanyulwa kufuneka njalo ukufika kuqala, and we’re addressing it today. ngokwesiqhelo, abantu badla ukuya ngalo sihloko ngokwahlukileyo, kuxhomekeke ukhetho zabo zokuhamba ngayo. Further, iindaba zakutshanje siyeva malunga neengozi ehlabathini factor kwihlabathi, njengokuba. Nangona uya kunqabile ukuba uve kwakukho kwingozi kaloliwe ethile, iyenzeka. Kanye njengoko enza umoya, imoto, ibhasi kunye nezinye iindlela zothutho. Nangona kunjalo, manani icacile - ngokusemthethweni, uloliwe yenye iindlela ezikhuselekileyo yokuhamba kule mihla! Inqanaba ofanayo ukhuseleko uya kweenqwelo lo gama zonke ezinye iindlela zothutho kufika emva.
Ngaba uloliwe yenye yeendlela ezikhuselekileyo zothutho kuwo onke amazwe?
Hayi, ayiyo. Asizizo zonke komzila kunye noololiwe abo umgangatho ofanayo. Xa sithetha kaloliwe ngokhuseleko zokuhamba, sidla sithethe ngayo kwimeko kwilizwe elithile. Ngokubanzi, uhambo ngololiwe kuba ikhuseleke kakhulu, kodwa nangoku kakubi ukuhlola imeko yimiqolo eli lizwe kunye nezothungelwano ukuba ufuna ukuhamba ngololiwe.
Njengokuba, kwiminyaka nje esixhenxe eyadlulayo U.S. kubalwa 32,367 kwehlisa, 570 kwehlisa zikaloliwe, yaye 485 kwehlisa air. Ezi amanani nje rough, kodwa ke zisizobela umfanekiso omhle kucacile ebonisa ukuba uhambo ngololiwe kunye umdla nomoya ikhuseleke kakhulu zombini ngaphezu ukuhamba endleleni.
Ukuba ojikelezayo Europe, hlola le uloliwe zibakala Akumangalisi.
Ziziphi Least Safe Iindlela of Transportation?
Oko kumele ukuba kube isithuthuthu. ehleka (ukuba kukho into funny apho) oogqirha wokubukela zibhekisela izithuthuthu (ngamanye amazwi, i iingozi ezibangelwa ekhwele enye) njengoko “kumjikelezo anikelayo.” Kubonakala, ezi ziingozi idla rhoqo yaye iyabulala ukuba uvelise intabalala abanikele omzimba. Ehamba ezinye oololiwe ngokukhawuleza eYurophu ayithethi ukuba iingozi ezininzi.
Ndingenza njani ukuba uloliwe Enye Iindlela ikhuselekileyo of Transportation Now?
Nazi ezinye izizathu eziphambili zokuba uloliwe yenye iindlela ezikhuselekileyo yokuhamba:
Xa zikaloliwe kunye noololiwe zithathwe ngokwaneleyo unonophelo (ngamanye amazwi, njalo izidingo, zigcinwe, indawo xa kuyimfuneko, njl), uya kunqabile wakha ubungqina naziphi na iingozi kunye le ndlela zokuhamba. Esinye sezizathu kukuba, ngokungafani kuhambiso endleleni, kukho indlela enye umdla ndlela kuphela (ngamanye amazwi, uloliwe) elandelayo indlela enye kwindawo yayo yokugqibela. Akukho zimoto ezingalindelekanga ziyeza indlela yakho, ngokwenza uphelelwa ulawulo phezu ivili. Akukho iinguqu ngesiquphe avule, kunye nezinye iimeko uxinzelelo kwaye kuyingozi. Lo isenokuba sesinye sezizathu zokuba uthutho ngololiwe kuseyinto enye iindlela ezikhuselekileyo yokuhamba ukuze kude.
I-Train yenye eyenzwe Iindlela zokuhamba kunye Inzuzo Environmental
Ukuba ukuthelekisa kaloliwe kunye kwendlela yothutho ngomoya, Singabonisa ngokulula ukuba uloliwe yenye yeendlela ezikhuselekileyo zothutho kodwa nokunye okuninzi ezinzileyo kunayo nayiphi na enye indlela yokuhamba. Njani? Oololiwe musa ukuvelisa ezininzi kwekhabhoni CO2, kunye nemisi uloliwe azikhutshwa ngqo emoyeni ephezulu. Plus, oololiwe musa osebenzisa amandla okanye indawo kakhulu, kwaye izinga ingxolo zimbalwa ngaphezu kwezinye iindlela zokuhamba. Uninzi lwabakhweli abazi-eco bakhetha oololiwe ukuba babe yindlela yabo yokuhamba. Abahambi emhlabeni Europe, kakhulu, umthande eco-ubuhlobo koololiwe kunye iingxelo zazo zokhuseleko.
Ngaphandle kukhankanywe ngentla apha izibonelelo zokusingqongileyo ukuba, ngaxeshanye, izibonelelo zethu zempilo, kuphela Train yenye eyenzwe Iindlela Of Transportation kodwa oololiwe ekhwele zinhle kakhulu empilweni yethu yonke.
Ngokuphathelele oololiwe abazeleyo, avumela abo achankcathe kuwo:
Hamba ujikeleze enqwelweni bahamba esikoleni kukaloliwe lo gama ethutha. Oku kunceda mobile nokuhlala umzimba
Hamba phantsi kwii-ofisi zazo okanye amakhaya emva kokuba ushiye isikhululo. Oku kakhulu somzimba wabo
Thatha ukulala kancinci kwindlela eya emsebenzini kwaye ubuye emsebenzini ngaphandle kokubeka emngciphekweni wokungena kwi ungquzulwano lwemoto. An Uthintelo ebalulekileyo yokhuseleko
Enjoy imisebenzi yolonwabo phakathi kwamanqaku A no-B. Indlela kwakuhle nelokuphumla ukufumana wena ngaphandle olubi
Kule mihla, xa wonke eyayisebenza kwaye exhumaxhuma esihlalweni emotweni yabo kwazo emsebenzini and vice versa, ngabakhe baya kuvela noko ixesha obandayo phakathi kubaluleke. Ukuba ithuba lokuphumla kuloliwe njengoko ukuhamba yenye yezizathu ezininzi zokuba abantu bakhetha oololiwe.
Ethetha koololiwe-elide umgama, bazi a ukhetho kumnandi ukuya njengoko uvumele esiphansi. Ukufumana ukusuka A ukuya kwindawo B 2 iiyure ngendiza zisebenza kakuhle, kodwa kukhuselekile ukuba impilo yakho? Ngaba umngeni post yethu blog “Uloliwe yenye eyenzwe Modes yokuhamba”? Can your umzimba nengqondo ukuprosesa ukutshintsha kwemozulu ngesiquphe, Uxinzelelo lomoya, nayo yonke enye into phakathi? Lutho. Le nto bekuhamba ukuqeqesha emhlabeni Europe unika umzimba wakho ithuba lokuba bakuqhele kotshintsho ezinokuzisebenza ngendlela ngendlela enempilo.
impahla (Safety) benefits
Ngqo impilo okanye ukhuseleko inzuzo, kodwa ukhuseleko imithwalo idlala indima entle ebalulekileyo abanye abakhweli. Kungakhathaliseki ukuba ukukhanya pack lokuhamba okanye hayi, ufuna imithwalo yakho enye. abahambi abaninzi abaqokeleli nezinto zakudala ezixabisekileyo, imifanekiso yezinto, imiqulu, etc. yaye bafuna izinto zabo kunye nabo. Ngelishwa, uhambo ngomoya waziwa imithwalo ezilahlekileyo ezonakeleyo kunqabile ukuba yenzeke xa uhamba ngololiwe. Plus, imithwalo wakho uhlala kunye nawe, ukuze kungabikho bani unokuzixhwila ngayo umthwalo. Ingaba oku isizathu ukuba uloliwe yenye iindlela ezikhuselekileyo yokuhamba? Sicinga ngoko.
umdla Train ayikho indebe wonke yeti, kodwa ngokuqinisekileyo yenye iindebe ezikhuselekileyo, kwaye kakhulu ebukekayo abantu, kakhulu. ixesha elizayo wena ucwangciso iholide oya kuyo, cinga ukuba Train yenye yeendlela ezikhuselekileyo zezothutho, kwaye unganqikazi ukunika uloliwe uhambo ithuba. Indihlala kakuhle le, ukuba kukhuselekile, ukuba super umtsalane, kunye namava lafika ilixa, nizikhumbule ngonaphakade. Ukuba ojikelezayo Europe, uxhumane nathi https://www.saveatrain.com babhukishe itikiti lakho kwemizuzu ngaphantsi kwesithathu yaye uqale besonwabela zokuhamba wakho kwi naLindiili!
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye okubhaliweyo kwaye sinike nje ngetyala ngekhonkco kule post blog, okanye cofa apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-safest-transportation%2F%3Flang%3Dxh - (Skrolela ezantsi ukubona Code lungisela)
#modesoftravel #ekhuselekileyo #safetravel #zokuhamba